Xaakimka ugu sarreeya Dalka Hindiya oo lagu eedeeyay faro-xumeyn (Halkaan Kaga Bogo Warkaan) | Baahin Media
Xaakimka ugu sarreeya Dalka Hindiya oo lagu eedeeyay faro-xumeyn (Halkaan Kaga Bogo Warkaan)
Xaakim Gogoi oo war qoraal ah ka soo saaray eedeynta ayaa “si buuxda u beeniyay” waxaana uu ku tilmaamay isku day “xasillooni darro looga dhex abuurayo waaxda garsoorka”.
Waxa ay ku andacooneysaa in xaakim Gogoi uu “xabadka geliyay, isla markaana uu ka taabtay meelo badan oo jirkeeda ah, isagoo isku dhajinaya”.
Haweeneyda ayaa sheegtay in Gogoi uu u sheegay in aanay cidna ku wargelin waxa dhexmaray, haddii kalena ay qoyskeeda la kulmi doonaan “dhibaatooyin waaweyn”.
“Waxay u muuqataa in cagajugleynta, dhibaatada iyo jirdilka aanay joogsan doonin ilaa iyo inta aan ka sheegayo halka uu arinka ka soo bilowday iyo ujeedada laga leeyahay,” ayay ku sheegtay warqada dacwada ah ee ay u dirtay maxkamada.
Waxaa qoraalka lagu sheegay in eedeymaha ay “gebi ahaanba been yihiin, si buuxdana uu u beeninayo”.
Waxaa lagu sheegay in haweeneyda “aysan fursad u heli karin inay si toos ah ula tacaamusho xaakimka ugu sarreeya dalka”.
Qoraalka ayaa tilmaamay eedeynta laaluush qaadashada ah ee loo jeediyay haweeneyda, waxaana lagu sheegay “inay u muuqato in eedeymaha been abuurka ah looga gol leeyahay xeelad cadaadis lagu saarayo dacwadaha kala duwan ee ay billaabeen maxkamadaha.”
Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in haweeneydaasi shaqada laga eryay “iyadoo la raacayo hannaanka saxda ah” kadib markii lagu helay “hab-dhaqan aan habooneyn”.
“Ma doonayo inaan sharafteyda hoos u dhigo oo aan ka jawaabo eedeymahan,” ayuu yiri, isagoo intaa ku daray “Si xushmad leh ayaan ula dhaqmaa dhammaan shaqaalaha maxkamada ugu saraysa dalka.”